Memcached: definition, ije na usoro mbu
Memcached: nkọwa dị mfe banyere nchekwa data In-Memory a
arụmọrụ nke ngwa dị ike na nchekwa data ejikọrọ. Ihe nchekwa data a na In-Memory na-eme ka o kwe omume ọ bụla iji gbochie ịbanye na diski ike iji gụọ data na RAM. Nke a abụghị naanị na-ewepu usoro sistemụ azụ, kamakwa ọ na-ebelata nkwụsịtụ. Ebe nrụọrụ weebụ ndị ama ama dịka YouTube, Facebook, Twitter na Wikipedia na-eji uru nke
emeghe emeghe ihe ngwọta
ruo ogologo oge wee si otu a nye ndị ọrụ withntanetị ahụmịhe nchọgharị ka mma. Mana olee otu Memcached si arụ ọrụ na kedu ka m si bido ya? Will ga-amụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara sistemu mkpuchi mkpuchi a ama ama na edemede a.
Gịnị bụ Memcached?
Kedu ihe owuwu nke Memcached dị ka?
Olee otu Memcached si arụ ọrụ?
Kedu uru na ọghọm dị na Memcached?
Kedu ihe eji eme Memcached mee?
Ibido na Memcached
Aha Memcached na-ezo aka na arụmọrụ dị elu
mepụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ gara aga site n'aka ụlọ ọrụ Danga Interactive maka Portal Online Portal. Emepụtara ihe nkesa a iji zere ịnweta nchekwa data ngwa ngwa mgbe ị na-eji ngwa weebụ na-achọ ihe. Ihe ngwọta mejupụtara iji nchekwa data nchekwa dị na nchekwa na-eme ka o kwe omume ịme ihe ndị edere na ebe nchekwa enweghị ohere dị maka ndị ọrụ nke saịtị inntanetị na oge ndekọ. The Memcached software bụ otu nnọọ ọrụ na onye-enyi na enyi na awade antinye dị mfe, nhazi na njikwa. A na-enye ya n'okpuru ikikere BSD ka e nwee ike iji ya, gbanwee ya ma ọ bụ depụtaghachi ya kpamkpam.
Usoro izugbe nke Memcached ije dịtụ mfe. Ọ bụ ihe atụ nke usoro nchekwa data ekesara ma mejupụta ngwa ahụ, ọba akwụkwọ ndị ahịa na ọdọ mmiri dị ka ebe atụ. Ọnụọgụ oge achọrọ ka etinyere na isi nchekwa nke ihe nkesa. Ọ kachasị mma ịgbalite ihe atụ na sava ọ bụla nwere ike ime na-enweghị ebe nchekwa. Na mkpokọta, ọnọdụ ndị a na-enweta ohere n'efu maka oghere
. Ọba akwụkwọ ndị ahịa ahụ bụ interface dị n'etiti ngwa kwekọrọ na Memcached. Ọ na-echekwa data ahụ ka edekọ ma debe ha na ihe nkesa dị. N'ihi ya ụlọ ọtụtụ ihe owuwu,
Memcached nwekwara ike iji ọtụtụ isi usoros otu oge.
E wezụga Memcached, Redis bụ ihe ọzọ na-ewu ewu na ebe nchekwa nchekwa data. Ọ bụ ezie na Memcached kwụpụtara maka ịdị mfe ya, Redis na-enye ọtụtụ ohere ngwa yana arụmọrụ. Na ntụnyere anyị na-ebi ndụ Memcached vs Redis
, ị ga-enwe ike ịchọpụta sọftụwia kachasị mma maka ebumnuche gị. >
Ebe nchekwa data ọdịnala na-echekwa data na draịvụ ike, ọkacha mma na Solid-State-Disk (SSD). N'ụzọ dị iche, na nke Memcached, data na-anọgide na ebe nchekwa ka ọ dị n'ime microseconds , nke na-ewepu igbu oge kpatara nkwụsị oge metụtara nyocha data. Ọ bụ ezie na enwere ike ịchekwa data maka ogologo oge, ọtụtụ data na-ehichapụ akpaghị aka mgbe oge ụfọdụ gasịrị.Oyibo Nke a bụ n'ihi na Memcached bụ
nchekwa dị mma , ọ bụghịkwa nchekwa data n'echiche kpochapụla nke okwu ahụ. Ya mere, ehichapụ data ndị pere mpe ozugbo enwereghị ohere maka ihe ọhụrụ. Mana olee otu usoro ndebanye aha na-esi arụ ọrụ? Ejiri ntọala
TCP na Ip njikọ wee bido njikọ. Ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ilele ụfọdụ data, Memcached na-achọpụtazi ma data ahụ ọ dị n'ime oghere. Ma ọ bụghị ya, achọrọ data dị mkpa site na isi ebe nchekwa. Onye ahịa ahụ na-agbakwunye uru dị mkpa na data metụtara ma ọ bụ na-etinye usoro data a n'ọba akwụkwọ mmemme. N'iji
, onye ahịa wee họrọ ihe nkesa nke echekwara data dị ka seusoro agwa. Ndị a bụ isi ihe ise na-egosipụta Memcached: data na-ebufe naanị na ihe nkesa;
data echekwara dị ka ụzọ abụọ / uru abụọ;
ndị dị iche ndị sava anaghị ekerịta ibe ha;
ndị sava naanị na-edegara RAM;
ọ bụrụ na ezughi oke, sava ahụ wepụrụ data kacha ochie.
na mgbagwoju anya nke ngwa kwekọrọ na . Usoro ncheta oge a dị mkpa karịsịa maka ngwa weebụ yana nnukwu okporo ụzọ na saịtị na-enweta ọtụtụ data. E wezụga ya ọtụtụ uru, ọ na-abịa na a ole na ole ọghọm. Nke a bụ nkọwa nke uru na ọghọm:
Oge mmeghachi omume dị mkpirikpi site na ịchekwa uru In-Memory
Na-echekwa data naanị nwa oge ma tụfuo ya ma ọ bụrụ na ọdịda dara d 'usoro Memcached
multlọ ọrụ a na-emepụta ọtụtụ ihe na-enye ohere ka ọ bụrụ nke nwere ike ịrụ ọrụ >
A ọkaibe na-emeghe isi ihe ngwọta na-emeghe data ụlọ ahịa
Ogo nke isi uru bụ nanị 250 odide (1 MB)
na-enye mfe njikwa na mgbanwe na ngwa mmepe
enweghị usoro nchekwa chọrọ mgbakwunye firewalls
Na-akwado ụdị data mepere emepe na ọtụtụ ndị ahịa na-asụkarị na asụsụ mmemme
Non redonya mere enweghị nchedo megide ọdịda site na ngbanwe ma ọ bụ nkwado data Mpempe akwụkwọ ederede echekwara gụnyere caching
oge ntinye data . N'ihe banyere caching, ihe echekwara nwa oge dị ka faịlụ, data na ihe oyiyi ka emere na oge ndekọ. Nke a na - emeziwanye arụmọrụ nke ngwa emetụtara ma na - enye ohere maka ọnụọgụ ọnụ ala kwesịrị ibuwanye ibu. Ndị mmepe na-ejikwa In-Memory iji jikwaa data nnọkọ dịka profaịlụ onye ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ nnọkọ nke Internetntanetị. Agbanyeghị, nke a chere na ịnọgidesi ike na data abụghị ọkwa dị mkpa. Ọtụtụ mgbe, Memcached bụ ezigbo ihe ngwọta mgbe ngwa chọrọ nnukwu arụmọrụ caching nannukwu ọnụ ọgụgụ. ịmalite site na Memcached
nke na-enye ohere maka ngosipụta nke ihe omume. Dabere na asụsụ mmemme eji, ị ga-enwe ohere nhazi dị iche iche maka onye ahịa na sava ahụ mgbe etinyechara ya. > ruo ọtụtụ afọ. N'ihi nke ahụ, na ntanetị ị nwere ike ịchọta ngwa, njikwa, na nsogbu nsogbu ozi maka API dị iche iche na sistemụ arụmọrụ.
Ntọala iwu nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
2021-04-18 15:03:20 | Nkuzi
Baskpụrụ Iwu nke Storelọ Ahịa Online Ọtụtụ mmadụ na-achọ ịmalite azụmahịa. Mana "ịbụ onye isi gị" jikwa abụ maka ịmata etu esi ewere ọrụ, yana nwee ike ilekọta ụfọdụ mgbochi iwu. Dị ka onye nchịkwa, ya mere ọ dị mkpa iji hụ na ọrụ ị na-ahụ n'ịntanetị na-emezu ọtụtụ ihe achọrọ, na-amalite site na nhọ...
Esi zụta ngalaba aha? Nzọụkwụ-site-zoo ndu
2021-04-18 02:44:43 | Nkuzi
Otu esi azụta ngalaba aha Taa, weebụsaịtị nwere ozi dị ka "kaadị azụmaahịa dijitalụ" ma ọ bụ isi okwu nke ndị ahịa. N'ihi ya, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa inwe otu. Peeji nke soshal midia na-enyekwa nnukwu ikpo okwu iji gosi onwe ha n'ịntanetị, mana ejikọtara ya na ndị na-eweta ndị ọzọ yana usoro ha....
Etu esi eme ka isi ihe di iche iche di na WordPress (Ultimate Guide)
2021-04-17 13:26:39 | Nkuzi
Webchọrọ ka ebuli isi ihe ntanetị Weebụ maka WordPress? Isi Weebụ Weebụ bụ Google nke na-enyere ndị nwe websaịtị aka melite ahụmịhe onye ọrụ na ogo nke weebụsaịtị ha. N'ime ntuziaka a, anyị ga-egosi gị otu ị ga - esi bulie Google Isi Weebụ Weebụ maka WordPress na enweghị ọrụ aka ọ bụla. bụ nke a...
TLD | Gịnị bụ ngalaba dị elu?
2021-04-16 00:05:36 | Nkuzi
Gịnị bụ TLD (ngalaba kachasị elu) Kemgbe Machị 2013, GTLDs ndọtị (ọnụọgụ Ọkwa dị elu na French, ngalaba jikọtara ọkwa dị elu) dị ka . fr, . org ma ọ bụ . com ka agbakwunye site na ngalaba ọhụụ ọhụrụ (na onye maara ihe, nTDLs). Ruo ugbu a gụrụ na 250, ọ ga - ekwe omume ịdebanye aha ọtụtụ puku ndị agb...
Ego ole ka ngalaba aha na-efu? Nkọwa na ihe atụ
2021-04-16 00:04:54 | Nkuzi
Ego ole ka ngalaba aha na-efu? Ndụmọdụ maka ịhazi atụmatụ ego na azụmaahịa gị na ndị nweere onwe ha taa enweghị ike ịme na-enweghị websaịtị nke ha. Ọ bụ ngwaọrụ dị mkpa mgbe ịchọrọ ịbawanye ntụgharị gị, nweta ndị ahịa ọhụụ ma ọ bụ gosipụta ngwaahịa ugbu a n'ụzọ kachasị mma. Ma a na-eke ọtụtụ weebụsa...
Adreesị ozi ịntanetị na adreesị n'efu | Ntụle igbe email
2021-04-10 22:07:38 | Nkuzi
Ntụle Izipu Efu Ihe karịrị ijeri ozi ịntanetị 300 kwa ụbọchị n'ụwa nile - nke ahụ bụ nnukwu ozi ịntanetị. Ọbụna na oge nke ozi ngwa ngwa, netwọk mmekọrịta na ekwentị telephony, ọ ka ga-ekwe omume iche n'echiche ndụ anyị kwa ụbọchị, ọkachasị na-arụ ọrụ, na-enweghị email dị ka ụzọ nkwukọrịta. N'iburu ...
Lookzọ mkpirisi Outlook: ụzọ mkpirisi igodo kachasị mkpa
2021-04-10 22:03:38 | Nkuzi
Lookzọ mkpirisi iji lelee ozi ịntanetị, ma ọ bụ ozi elektrọnik, abụrụla ụzọ dị mma iji kwurịta okwu ọtụtụ afọ. Ojiji nke iji ozi elektrọnik bụzi ihe ọtụtụ mmadụ na-eme kwa ụbọchị. Izipu ozi ịntanetị bụ ngwa na mfe. Site na ndị ahịa email nke Outlook, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ihe omume ma ọ bụ hazie n...
Etu esi ezipu ozi Twilio SMS site na WooCommerce (nzọụkwụ site na nkwụsị)
2021-04-10 15:39:14 | Nkuzi
Chọrọ izipu ozi Twilio SMS site na WooCommerce? Site na amamọkwa SMS, ịnwere ike ịnọnyere ndị ahịa gị, gwa ha mmelite usoro, zipu koodu ego na ihe ndị ọzọ. Kedu ihe kpatara ịgbakwunye ọkwa SMS na WooCommerce? Nkwupụta SMS bụ ụzọ kachasị mma iji nye ndị ahịa gị...
Otu esi emepụta mmapụta WordPress nke dabere na ọnọdụ (nzọụkwụ site nzọụkwụ)
2021-04-10 15:37:35 | Nkuzi
Chọrọ ịmepụta WordPress popup dabere na ọnọdụ ndị ọbịa gị? Creatmepụta popups dabere na WordPress na-enyere gị aka ịnye ozi ahịa ziri ezi, ndị ziri ezi, n'oge kwesịrị ekwesị. Nke a pụtara ahụmịhe onye ọrụ ka mma na nnweta ego maka saịtị WordPress gị. Na nkuzi a, anyị ga-egosi gị otu esi emepụta mmap...
Nzukọ Google: maka nzukọ nzukọ otu nzukọ vidiyo
2021-04-03 18:30:54 | Nkuzi
Gịnị bụ Nzukọ Nzukọ Google na nzukọ na-ewere ọnọdụ n'ịntanetị ọtụtụ mgbe, na mkparịta ụka vidiyo dị nro dị oke mkpa maka azụmaahịa ọ bụla. N'oge nkwukọrịta na nhazi nzukọ ụwa ọnụ, nyiwe nzukọ ịntanetị abụrụla ihe dị mkpa. N’ebe a, ergonomics nke ngwa ọrụ na ọsọ nke nnweta na-arụ ọrụ dị mkpa. Gugul m...
Mepụta nzukọ mbugharị: nke a bụ otu esi ahazi nzukọ Mbugharị
2021-04-03 18:29:11 | Nkuzi
Mepụta mbugharị nzukọ: nke a bụ otu esi ahazi nzukọ na Nzukọ Mbugharị Video abụrụla akụkụ nke ọrụ kwa ụbọchị n'ọtụtụ ọrụ. Inwe ike ikwurita okwu n'etiti ndi otu gi, site na vidiyo ma obu olu, abughi ihe di nkpa mgbe ị na-aru oru site na ulo, kamakwa ihe ngwọta bara uru maka igbanwe echiche n'etiti n...
Igbe TV | Tụnyere nke kacha mma multimedia igbe 2021
2021-04-03 18:26:51 | Nkuzi
Tụnyere nke dị iche iche TV igbe: ngwa ngwa gụgharia na otu Pịa Ikiri usoro na fim online bụ akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị maka ọgbọ nke dijitalụ natives. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-ekiri akụkọ ahụ mgbe usoro ọzọ nke usoro kachasị amasị ha ga-amalite. Onye ọ bụla nke na-ekwu na ha na-e...
Kedu ihe bụ igwe ojii igwe ojii? Nkọwa na njirimara
2021-04-02 21:14:54 | Nkuzi
Nkọwa Dị Mfe nke Igwe Igwe ojii Maka nwa oge ugbu a, enwere ike ịghara idozi igwe ojii ka ọ bụrụ naanị usoro na - adịru nwa oge na mmepe ngwanrọ. Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, igwe ojii aghọwo igwe nke ntinye dị mkpa nke na-enyere ụdị azụmaahịa ọhụụ aka na ịbawanye asọmpi. Enwere usoro mmepe emebere maka akụr...
Memcached vs Redis: nyocha nke ọdụ data In-Memory a
2021-04-02 21:13:36 | Nkuzi
Memcached vs Redis: Comparison of these In-Memory Databases Iji In-Memory ọdụ data dị ka Memcached na Redis nwere ike n'ike n'ike nwekwuo arụmọrụ nke ike na-achọ ngwa mgbe ijikọ na nchekwa data. Ihe ngwọta abụọ a na-emeghe na-arụ ọrụ n'otu ụkpụrụ ahụ. Agbanyeghị, mgbe a bịara n'ihe gbasara ngwa yana...
Esi tinye Mgbasa ozi Amazon na WordPress saịtị gị (Metzọ 3)
2021-04-01 20:00:02 | Nkuzi
You chọrọ itinye mgbasa ozi Amazon na saịtị WordPress gị? Mgbasa ozi Amazon nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji nweta ego na ntanetị. Na mgbakwunye, ha nwere usoro nnabata ngwa ngwa ma dịkwa mfe ma e jiri ya tụnyere netwọọdụ mgbasa ozi ndị ọzọ N'isiokwu a, anyị ga-egosi gị otu esi agbakwunye mgbasa ozi Ama...